Qubanaha » Gudoomiye Taabid oo xolka la wareegay.+sawiroo
Gudoomiye Taabid oo xolka la wareegay.+sawiroo
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa xalay xilka kala wareegay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, kaddib munaasabad ka dhacday xarunta Aqalka dowladda Hoose.
Munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Mas’uuliyiin iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabada.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in mudadii sanadka iyo barka uu xilka hayay waxyaabo badan ay qabteen, sida dhismaha jidadka Muqdisho.
Waxaa uu ugu baaqay Guddoomiyaha cusub inuu ku dhiirado waddooyinka inta dhiman dhismahooda, isla markaana uu ka bilaabo mashaariicda sanadkan uu helay Gobolka.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir iyo duqii hore ee Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa kula taliyay Guddoomiyaha cusub inuusan shaqaalaha gobolka uusan xaaqin, kuna bedelo shaqaale cusub.
“Aniga halkan waxaa ugu imid dadkii joogay, oo aan wada shaqeynay, ma jirin dadka aan farqaha ku sitay, iyo in aan iskoobo dadkii shaqeynayay ku xaaqay, dad kale ma keenin, dadkii aan u imid ayaa la shaqeynayay”ayuu yiri Guddoomiye Madaale.
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa balan qaaday inuu shaqadii uu qabtay Guddoomiyihii hore uu halkeeda ka sii wadi doono, isagoo xusay in dadka hada ka shaqeeya gobolka ay ku filan yihiin shaqada, hadii ay iskaashadaan.
“Uma baahni geesiyaal meel kale ka yimaada, inteena joogta hadii aan iskaashon waa ku filanahay, waxna waa wada dhisi karnaa”ayuu yiri Guddoomiyaha cusub oo ka jawaabayay hadalkii Guddoomiyihii hore.
Guddoomiyaha cusub Taabid ayaa balan qaaday in xuquuqda shaqaalaha Gobolka uu dhowri doono, isla markaana uu ka shaqeyn doono sareynta sharciga iyo sugida amniga.
Waxaa uu sheegay inuu ilaalin doono hantida umadda Soomaaliyeed iyo sareynta sharciga, isagoo xusay inuu hubo hadii uu go’aankaas qaato in saaxibo badan oo uu leeyahay ku weyn doono.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ka hadlay gaba gabadii munaasabada ayaa sheegay in horumarka uu dalka gaaray laga dareemi karo xaflada xil wareejinta oo xilli habeen dhaceysa.
Mr Kheyre ayaa sheegay in xilku yahay meerto, isagoo xusay in Guddoomiyihii hore wax qabad fiican uu sameeyay, isla markaana uu ku amaanan yahay shaqada uu dalkiisa u soo qabtay, waxaana uu ugu baaqay inuu gacan buuxda uu siiyo walaalkiis xilka la wareegaya.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa u bilaabanaya maalmo shaqo oo adag, iyadoo laga sugayo inuu wax ka qabto ammaanka Caasimada.